जसपा ठाकुर समुहलाई २ मन्त्रालय दिँदा, यादव समुहले के दियो प्रतिकृया ? - SandeshMedia.com
फोन गरेर डाको छोडेर रोइन बोल्न सकिनन त्यसपछि फोन का’ टियो…
जसपा ठाकुर समुहलाई २ मन्त्रालय दिँदा, यादव समुहले के दियो प्रतिकृया ?
६ श्रावण २०७८, बुधबार ०८:१४
काठमाडौ । ओली सरकारको सारथी बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर पक्ष देउवा सरकारमा पनि सहभागी हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने घोषणा गर्दा उनको विपक्षमा रहेको ठाकुर समुह मत दिने बेलामा यु टर्न भएको थियो । अहिले दुई मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने निर्णयमा पुगेको छ ।
अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भएको भेटपछि यस्तो सहमति जुटेको हो । ठाकुर बुधवार विहान देउवालाई भेट्न पुगेका थिए । बालुवाटारमा विहान भएको छलफलमा दुई मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने सहमति जुटेको हो ।
ठाकुर पक्ष सरकारमा जाने कुरालाई लिएर उनकै पार्टीको उपेन्द्र यादव पनि सहमत रहेको बताइएको छ । पार्टीको आधिकारीकताको विवाद लिएर निर्वाचन आयोग पुगेका ठाकुर र यादव समुह अब एकताको वाटोमा छन् । दुई मन्त्रालयमा सहमति जुटेपनि मन्त्रालयको टुंगो भने लागेको छैन ।
६ श्रावण २०७८, बुधबार ०८:२७
६ श्रावण २०७८, बुधबार ०८:२४
६ श्रावण २०७८, बुधबार ०८:१८
६ श्रावण २०७८, बुधबार ०८:२१